“Dhugumatti, ka’uumsi halkanii” kana jechuun hirriba booda yeroo halkanii salaatun, “[arrabaa fi qalbiin] wal simachiisutti irra jabaa fi dubbiifis irra qajeelaadha.” Kana jechuun Qur’aana qara’uu fi hiika isaa hubachuuf guyyaa caalaa halkan yaanni fi niyyaan walitti sassaabamu. Sababni isaas, guyyaan waqtii namoonni faffaca’an, sagaleen itti baay’atuu fi yeroo galii jireenyaa itti barbaadataniidha. Guyyaa caalaa yeroo halkanii arrabaa fi qalbiin walitti galuu (wal simatu). Kana jechuun wanta arrabaan jedhan qalbiidhaan ni hubatu, itti xinxallu. Qalbiin yeroo halkanii na argaa, fedhii lubbuu, jeequmsa fi kkf irraa duwwaa ykn bilisa waan taatuf wanta arrabaan jedhan sirritti hubatan.